Yenza umugqa we-IMEX BuzzHub entsha
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Zokuhlangana Komkhakha » Yenza umugqa we-IMEX BuzzHub entsha
Izindaba Zezinhlangano • Ukuhamba Ngebhizinisi • Investments • Izindaba Zokuhlangana Komkhakha • emihlanganweni • Izindaba • Ukwakha kabusha • Ezokuvakasha • Inkulumo Yezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izimfihlo Zokuhamba • ezithrendayo Manje • I-USA Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezihlukahlukene
I-IMEX Group ihlelelwe ukudala umsindo phakathi kwemihlangano yamabhizinisi omhlaba kanye nemicimbi yomphakathi ngokwethulwa kwesikhulumi esisha sedijithali, i-IMEX BuzzHub ngoMeyi 12.
Intwasahlobo yisikhathi esimatasa kakhulu sonyaka sezinyosi, futhi labo abazi imibukiso ye-IMEX ubuso nobuso bazokhumbula i-buzz edumile ye-IMEX.
Lo mqondo omusha waklanywa kulandela ucwaningo olunzulu lwamakhasimende nezifundo ezitholwe ezinhlelweni ezimbili zePlanetIMEX ngo-2020.
Izinsuku ze-Buzz zizongenelwa ngokuxhumana nabantu, ukufundiswa ngongoti, ukuhlangana komphakathi, nezimanga ezigcwele ubumnandi.
Okuhlangenwe nakho okusha kwedijithali kuzosebenza isikhathi esingaphezu kwezinyanga ezine kusuka ngoMeyi kuya kuSepthemba. Inikwe amandla yi-Swapcard futhi iphethwe yi-ejensi yokudala ethola imiklomelo, uSmyle, i-IMEX BuzzHub inikeza umphakathi womcimbi womhlaba wonke amathuba amaningi okufunda, ukwabelana ngolwazi kanye nenethiwekhi ngokususelwa kunqwaba yezintshisekelo zobungcweti nezomuntu siqu.
Umqondo omusha wenzelwe ukulandela ucwaningo olunzulu lwamakhasimende kanye nezifundo eziningi ezitholwe ezinhlelweni ezimbili zePlanetIMEX ngowezi-2020. Ama-ejensi e-IMEX, ophathina nabanye ochwepheshe babambe iqhaza elibalulekile ekwakheni okuqukethwe namafomethi ku-IMEX BuzzHub.
Izivakashi zingakhetha emisebenzini ehlukahlukene nasezifundweni - konke mahhala - futhi zikhethe izinketho ezifanela kangcono amabhizinisi abo noma izinhloso zokukhula komuntu siqu.